Milomano lalao an-tserasera - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
ny lalao amin'ny aterineto maro Nilomano mampahery, satria eto dia azo atao ny fiadiana ny harpoon sy mihaza amin'ny lalina ao amin'ny taratra, antsantsa sy ny jellyfish. Ny isan-karazany ny litera mitsoraka mba hisambotra trondro, mba hanenjehana jiolahin-tsambo mitady harena ny sunken sambo. Amin'ny iskalkah raha manangona vola madinika ianao sy ny vatosoa, mankafy ny hatsaran-tarehy, izay malala-tanana sy manan-karena anaty rano izao tontolo izao. Submarines nanomboka ny ady, ary ny mpilomano ireo mifaninana ho ny anaram-boninahitra. Ary mazava ho azy, eto no hihaona Fanalana Bob, iza no hampahafantatra anao ny namany sy ny mampiseho ny tanàna be voninahitra ny Bikini Bot. Ary ny milalao Tamin'izany rehetra izany dia lafo vidy dia maimaim-poana.
Lalao Mandeha sambo tamin'ny Category:
Ny tsara indrindra Swimming lalao
Mahery fo ao amin'ny Ranomasimbe
Lego: minifigurki retriever any an-dranomasina
Lalao Olaimpika Rio 2016
Lilo & Stitch: voanjo Express
Kintana rehetra pupps
Ranomasina Colonial Battle
Pet Lalao Olaimpika
very saina Aquarium
Ny Semboly mpamono Pirates
Donald gana in Harena Frenzy
Deep mpisitrika 2
Fiainana ao amin'ny Ranomasimbe
Angela dobo filomanosana
Miomana mpitsabo mpanampy amin'ny lomano
Swimming Mpampianatra Dress
Lavaka tsy hita noanoa
Barbie mandeha milomano
Hanadio ny ranomasina
Harena Sarobidin 'ny Monkey
Ranomasina ny lalina fupa
Duckling - mpisitrika
Cat - mpisitrika
Johnny eo amin'ny lalina
Hyper fanatanjahan-tena milomano amin'ny 50 metatra
Loz Ness Ski Water
Clifford Ny Zava-bita Red Dog Dog Adventure
Sambo, Hazo ary Shanties
Sambo sambo hafainganam-pandeha
Farany Swimming lalao
Ny sambo farany
Mpitafika sambo ambony
Ny Zavamananaina Scuba
Niaraka tamin'ny hetsika ara-panatanjahantena hafa, milalao lalao an-tserasera ihany koa Swimming mahaliana
Lalao Online Rehetra Milomano lalao an-tserasera
Swimming – fa ny fomba fiaina
Raha mikasika ny lomano, toa tampoka toa vanin-taona mafana, tora-pasika amoron-dranomasina onja sy ny sambo, gulls sy catamarans, makamba, foza sy ny jellyfish, antsantsa, taratra & hellip; Lalao milomano misy fetra amin'ny fanehoana. Eto dia afaka:
tia manao ski ambony rano,
milomano amin'ny antsitrika,
hanosotra any amin'ny farihy, na maka ny bata amin'ny fingotra ganagana. &Nbsp;
Ny lalao manome anao ny hafainganam-pandeha sy ny valiny haingana, ny sasany dia feno loza, fa ny hafa kosa dia ampianarina fahadiovana. Na iza na iza afaka ny ho lasa piraty ka mandehana handresy ny ranomasina mba hitady ny tombom-barotra, ny fisintonana mpivaro-mandeha sambo na manaraka ny sarintany, hitady ny very nosy amin'ny harena. Dark manafina lalina zava-miafina maro. Tantara mahafantatra ohatra maro, rehefa nijaly ny sambo loza hiala mponina tora-pasika, ary tsy misy olona mahalala izay itoerany nilentika izy ireo. Ny sasany ankehitriny tsara vintana ny mahita toy izany fanariam, izay mbola nalevina tratrany ny volamena sy vatosoa, antitra sy silverware vola madinika. Fa dia afaka ho lasa mpisitrika sy perla samihafa mba hanandratra eny ny ambany akorany, ao amin'ireo dia hita fa te hahafanta-javatra voajanahary.
Games Swimming traikefa nahafinaritra
Lalao filomanosana manome fahafahana maro ary koa tia ny rano rehetra, antoka misy safidy ny gameplay ho anareo. No tianao ho lasa mpihaza ny antsantsa ary jereo ao an-maso? Miomàna harpoon sy Manitrika, nitondra ny jono. Miezaha tsy hamela ny antsantsa nilomano miakatra ho any aminareo avy any aoriana, ary nisy mihoatra ny iray. Fanafihana tany alohany, dia hahatonga ny trondro-mpamono olona, ​​na iza na iza anareo ho ny vy vazany dia vazan'ny. Tsy ny rehetra anefa izany anaty rano mafy ao amin'ny fanjakana. Beautiful toerana tsara tarehy sy sariaka mponina ny singa loko mamirapiratra hoso-doko sy miara-mitovy extravaganza, ny fipoahana ny avana sy ny loko.
Leave a mahafaty fitaovam-piadiana teo amoron-dranomasina, nitondra basy fakan-tsary ny mampahalehibe tifitra ho ny rakotra fanaovam-panavotana ny gazety momba ny zavaboary. Mahaliana sy mahafinaritra ny mitaingina ny onja ho Surf. Mifidiana ny birao sy ny miezaka mba hisambotra ny onja avo indrindra. Ny ankizivavy tsara tarehy no miezaka ny mitaingin-soa ny molony, maka sary ny sary sy ny sariitatra sy ny tantara an-tsary boky mpandray anjara matetika adala manodidina fotsiny, noho izany dia hifalifaly. An'izay mitady lehibe fanatanjahan-tena? Avy eo mitsidika ny dobo filomanosana, izay iray amin'ireo lalamby an'ny aminao. Nandritra ny tsato-kazo famantarana hitsambikina anaty rano ary miezaka ny hahazo manodidina ny mpanohitra amin'ny sarotra ity fifaninanana. Maka bahana ambonin'ny rano ambonin'ny sy mitantana ny tananao fofonaina, raha ny lohany teo mandroboka. Ankoatra ny haingam-pandeha milomano ao amin'ny dobo filomanosana ao amin'ny fampisehoana mampiseho ny fahaiza-Fikarohana, rehefa vondrona ankizivavy indray miaraka manao hetsika sasany, ary nanorina ao amin'ny bika. Fa ny ankizilahy liana mba hitsambikina avy amin'ny tilikambo sy ny fomba ho ambony, ny mahafinaritra kokoa.
Efa mba nanandrana mitsoraka avy amin'ny avo? Lalao video hanampy anao hianatra vitsivitsy tetika, fa tena fiainana tsara kokoa ny hanao ny Feat eo ambany ny fanaraha-maso ny mpanazatra. Mitsambikina avy amin'ny avo ho voajanahary vatana ny rano dia tena mampidi-doza. Ny Tian'ny Ankizivavy milomano amin'ny mermaids, mamantatra ny ambany, ary nomeny ny ny an-trano. Indray mandeha koa, fahafahana mahatsapa toy ny trondro kely, izay mitady ny ho tafavoaka velona amin'ny biby mpiremby. Na dia afaka milomano amin'ny feso; manova ny toe-in vatohara mazes, ny fisorohana ny fifandonan'ny planeta amin'ny poizina jellyfish; mihaza harena sy ny trondro.